Kedu igwe kwụ otu ebe Jimmie Johnson na-agba? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Jimmie johnson ịnyịnya ígwè - the ultimate guide
Jimmie johnson ịnyịnya ígwè - the ultimate guide
Kedu igwe kwụ otu ebe Jimmie Johnson na-agba?
Mgbe afọ 18 n'azụ ụkwụ nke ụgbọ ala ngwaahịa, 2020 Daytona 500 na-egosi mmalite nke njedebe makaJohnson. Na ọ na-amalite, dị kaJohnsonna-ahọrọ, na otunọkwasi. Kwadoro ma zuo ike n'elu tube nke Trek Emonda ya,Johnsonbanyere pedal kwa afọ ChampionsGbaa ịnyịnyamakaIgweNchedo.Mar 6 2020
Kedu ọsọ ọsọ ị gbalago otu tram tupu oge a? Enwerem? Eeh. Narị otu narị. Ọ bụghị ụzọ ọjọọ iji mee ka ndụ, nri? Mba, maa.
Enwere m ahụ iru ala na aka gị na 150 karịa afọ 70. Nne na nna m ochie nwere ụlọ ọrụ ọgba tum tum na Southern California. Ya mere, etolitere m n’ịnyịnya ígwè.
Papa m bụ nnukwu ma rụọ ọrụ na ha ma nyere aka weghachite ha, rụọ ọrụ ma rụọ ọrụ, wee nyezie oge ya n'okporo ụzọ ụgbọ oloko mpaghara iji nyere aka rụọ ha n'ihi na ọ nwere ike ịnya traktọ. Yabụ mụ na ụmụnne m etolitere na egwu anyị chọrọ ime nke ahụ kemgbe anyị bụ ụmụaka. Egwuregwu mbụ ahụ nwere nrụgide n'ihi ya Jeff Gordon họpụtara m ịkwọ ụgbọ ala ya.
Agara m ụgbọala Lowe na Lowe's Motor Speedway. Ọ bụ na mbubreyo 2001 na Jeff Gordon na-alụ ọgụ maka mmeri nke ị maara, m kwesịrị ịhapụ ya, nke m mere n'ihu ya mgbe e mesịrị n'ọsọ ahụ. Ọ dabara na ọ daraghị m ma mebie afọ mmeri ya, mana ịnọ n'okpuru microscope na-anya maka ihe dịka nnukwu ụlọ ọrụ ahụ na mpempe akwụkwọ nkwado, enwere nnukwu nrụgide, enweghị m nnukwu ụbọchị dịka m kwuru Emere m ka m kwụsị ya ma mechaa ya na 30s, mana ọ bụ onye na-emeghe anya otú ngwa ngwa ndị na-agba iko ahụ dị, ọ na-ekpo ọkụ.
M na-ọsụsọ azụ ebe a. Ee, anyị nwere igwe oyi. Echere m, ịrịgo n'ụgbọ ala, n'agbanyeghị agbanye ọkụ dị n'èzí, ọ nwere ike bụrụ otu narị, 110.
Yabụ na ọ siri ike. Ma ọkọchị na-abịa. Nke ahụ bụ akụkụ siri ike.
Okwa gi na uwe oku. Akwa anọ nke brigade suit. Kedu ọsụsọ ị na-atụfu? M na-agbalị ghara ida ihe ọ bụla bụ ihe mgbaru ọsọ.
Anyị nwere nnukwu akpa n'okpuru oche m nke na-ejide Gatorade nke m na-a drinkụ ma m na-anwa ịtụle onwe m tupu na mgbe na-adị n'ime paụnd. Chaị. M na-a litersụ lita mmiri mmiri atọ ma ka na-efu otu paụnd.
Chaị. Sụchaa lita mmiri mmiri atọ, atọ na ọkara. Nke ahụ siri ike nkwenye.
Ọsọ ahụ ga-abụ mkpari. Iwe na-ewe gị ma ị pụọ. O doro anya na enwere m oge m tụrụ ụjọ, ị maara.
Egwu ọ bụla nwere ihe egwu dị iche iche nke na-abịa ma ị ga-emeri ha. Ọ dị m ka ịhọrọ ụgbọ ala ngwaahịa ma ọ bụ ịnya ụgbọ ala, na-eme ka m banye n'ụdị ịgba ọsọ kachasị nchebe. Ya mere, mgbe m malitere, enwere m obi ụtọ mgbe niile na gburugburu ebe obibi.
Ihe ọghọm nke Dale Earnhardt Sr. Kemgbe ahụ, a rụọla ọrụ iji mee ka ụgbọ ala anyị na nchekwa dị mma. Anyị nọ ugbu a n'ọnụ ụzọ ebe ọ dị mma imerụ onwe gị ahụ.
Mana anyị emeela n'ezie ọkwa nchekwa, ọ dị m mma ka ịnọ ebe ahụ ugbu a. Ihu ọma, ị nwere ike ịkọwa ntopute nke ụgbọ ala ahụ? Mgbe ị malitere dị ka rookie, ruo ọnọdụ anyị na 2018? Ihe gbanwere ọtụtụ bụ ụkpụrụ. Ọnwụnwa ahụ bụ ime ka ha dị nchebe ma ha na-anwa igbochi anyị.
Ma na mbata nke teknụzụ, anyị na-agbaji ihe ndekọ ihe ịga nke ọma kwa izu na ịnwe ike ịnyịnya, belata mgbada, ma belata njikwa igwe. Ya mere, teknụzụ na -agabiga ihe NASCAR na-anwa ma na-egbochi. Anyị na-erute ha ọsọ ọsọ karịa ka ha nwere ike ijide anyị.
Ọ ga-esiri m ike ma ọ bụrụ na m ajụghị ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịnweta n'ezie, ị maara, nnukwu obi ụtọ na-agba ịnyịnya ebe a maka ndị na-ekiri anyị. Nsogbu adighi, enwere m olile anya na inwere ike idebe ya ebe ahu ozo. Ekechibidoro m.
Na-ada azụ azụ ebe ahụ, Amanda? Eeh. Ebee ka ị na-eche ọtụtụ n'ime ihe mmewere gị? Naanị m chọrọ ịmịgharị, ọ na-atọ ụtọ mgbe niile. Oh, na-enyere aka ma ọ bụrụ na ịnọ n'okporo ụzọ.
Onye na-anọchi Jimmie Johnson na 2021?
ọkwọ ụgbọala Alex Bowman
Onye obia ozo bu ndu ndi mmadu na agba oso. Ọ bụ onye mmeri NASCAR oge asaa na ise n'ime mmeri ndị ahụ, laghachi azụ azụ azụ. Nke ahụ dị mma.
Ihe a na-enwetụbeghị tupu oge ọzọ, ọgba aghara na ụwa nke ịgba ọsọ Indy. Yabụ onye ọ bụla nabatara enyi m Jimmy Johnson. (Okwu ndị na-ege ntị na ịkụ aka) A sị m na m ga-amakụ gị.
Ama m. Amaara m na ọ bụ ihe iju anya Anyị enweghị ike ịmakụ ma. - Ama m.- Anyị anọghị ebe ahụ, mana anyị na-eru nso.- N'oge na-adịghị anya.
Ama m ezigbo? - Eeh. Kedu ka ị mere? - M na-eche kediegwu. Enwere m olileanya na gị onwe gị. - Eeh.
Adị m mma. Ma ị bụ otu afọ gara aga echere m. Ma ị mara ọkwa na ị lara ezumike nká.
Ya mere, ị dị ka, ee, na-egwu egwu.- Psych.- You're dị ka ndị egwu a ndị dị ka njem njem m, ma ọ bụghị ya.- Ọ bụghị, mba, echekwara m ya tupu m pụta ma ama m ị chọrọ ka m jụọ onwe m gbasara ya.
You makwa na echeghị m dịka gị, echeghị m na ị nwere ike ịkwụsị ịbụ abụ ma ọ bụ igwu egwu ma ọ bụ iso ndị otu egwu. Ya mere, adị m njikere ịhapụ agbụrụ 38 kwa afọ nke m meworo kemgbe ihe karịrị afọ 20. Ya mere ụdị dị ka n'okporo ámá, echere m maka gị na njegharị na ihe.
Ma ugbu a enwere m oge dị mkpụmkpụ karịa maka agbụrụ ma enwere m obi ụtọ dị ukwuu na-eme ya. - Ya mere maka ndi nzuzu n’ime ime ulo, gini bu ihe di iche n’etiti NASCAR na Indy? - Ama m na m abụọ. Enwere m ike ịhụ na enwere ndịiche, mana kedu nke kachasị iche? - Site na echiche ịchọ mma, ị bụ nnukwu sedan.
Cargbọ ala Indy bụ obere ụgbọ rọketị dị fechaa nke ị na-anya. Na n’ụzọ nkịtị ibu nke ụgbọala ga-eme ka Indy ụgbọ ala a egwuregwu ụgbọ ala. Ma ụgbọ ala NASCAR ga-adị ọtụtụ ka SUV - Ya mere chere, ọ bụ ya? ọ dịkarịrị njọ? - Eleghị anya mara mma nke ukwuu.
Ma ahụmahụ ịnya ụgbọ ala dị nnọọ iche. Gbọ ala Indy na-ewe oke iwe na ụgbọ ala anaghị ada mbà. Dị ka a ga - asị na ịnweghị ike imerụ taya ahụ, ị ​​nweghị ike mebie brek.
Na ike bụ nnọọ elu mgbe ụgbọala. Ọ bụ ụgbọ ala ka ukwuu nke nwere ụgbọ NASCAR. Nwere ike ịkagbu brekị n’ọsọ, ị nwere ike imerụ taya ahụ, ị ​​ga - emezikwu ya nke ọma - Ọ dị mma, yabụ emeela nke ahụ? Ọ dị onye ọ bụla hapụrụ NASCAR, ọkachasị n'ọkwa dị oke mma wee chere, ee, aga m anwa Indy.
Ọ dịtụla onye mere nke ahụ? - Ọ nwere ike ịbụ mmadụ? A gwara m na 1970s, mana ee, ọ dịghị ihe ọ bụla n'oge a - anụtụbeghị m nke ahụ. - Anyị enweela ndị ọkwọ ụgbọala na-emeghe emeghe na-anwale NASCAR n'oge na-adịbeghị anya, mana ọ bụghị n'ụzọ ọzọ. N'ikwu eziokwu, nke ahụ bụ nrọ m bụ nwata.
Na-etolite na West Coast, Indy Car bụ nnukwu egwuregwu nke ọgbọ m nke ịgba ọsọ na ịgbalịsi ike ka ụwa m gbanwere mgbe onye nrụpụta m gbaara kwuru, sị, 'Hey, lee, anyị agaghị anọ na Indy Car. Kwesịrị ịga North Carolina wee gbaa ọsọ ụgbọ ala. Ma mgbe ahụ ụzọ m ka edoziworo. - Chaị. - Ee, mana laghachite na ya ugbu a, ọ dị mma. - Amaara m, enwetara m ya, nke ahụ bụkwa. ' , ọ dị ka ihe nkiri.
Dị ka m gụrụ banyere gị n'abalị ụnyaahụ ma chee, 'Nke ahụ na-ada ụda dị ka akụkọ dị egwu maka ihe nkiri, n'agbanyeghị. Echere m na ọ bụ naanị na m ga-ahụ ya.
Ya mere ị na-amalite ịhụ na ụmụ agbọghọ gị bụ ndị obi ike dị ka gị? Nke ahụ ọ na-emenye gị ụjọ? N'ihi na ọ bụghị gị, ọ bụ gị. Ọ na-esiri m ike ịhụ ụmụ m ka ha na-eme ihe masịrị m.
Amam na ha huru ya karia onwe m isonye. Ma anyị bụ ezinụlọ na-arụsi ọrụ ike ma a bịa n’egwuregwu ski. Girlsmụ m nwanyị na-agba ịnyịnya s ma na-awụli ịnyịnya.
Anyị nwere igwe kwụ otu ebe. - Oh, ha na-eme ihe ọ bụla nwere ike imebi ọkpụkpụ olu. - O ziri ezi, mana achọrọ m iche na nchikota nke nlezianya nke mama na mgbe ahụ ụzọ nzuzu m ga-esi dozie ha. - Ọ dị mma, nguzozi ahụ dị mma - nguzozi ahụ dị mma - yabụ olee otu ọ na-adị gị ịnweta ndị Fans na nkwụnye ahụ ọzọ? - Ọ dị mma ịlaghachi ọrụ na ịlaghachi na egwu ịmara na egwuregwu anyị dị na TV.
Na mgbe ahụ Fans ji nwayọ laghachite ma ugbu a na ntụzi aka nke COVID apụla, n'ezie ịnwe ọkara ama egwuregwu jupụtara na Fans bụ nnukwu saịtị ma ike ha wetara dị ịtụnanya. - Ike ahu bu onye ara - abiala m Indy na NASCAR ma buru onye ara - O di uto - dika a ghaghi inyere onwe m aka, odim n’aghotaghi ihe n’eme ma dika m, wow! N'ihi na ọ bụ naanị oge dị mma. Ọ dị ka ememme egwu mba.
Kwesighi ịmara egwu ahụ. Naanị ị nwere ezigbo oge. Yabụ, ndị fans nwere ike ịme ntuli aka.
Ọ bụ ụgbọ ala gị Agba nke ụgbọ ala gị? - Ee, yabụ enwere ohere dị ukwuu. Ọ bụrụ na ndị mmadụ chọrọ ịmatakwu banyere ya, gaa na carvana.com.
O doro anya na anyị na-anwa ịchọpụta otu esi ejikọ ndị Fans. Fans ahụ abịaghachila na nkwụchi ahụ, naanị ihe anyị chọrọ bụ ka ha mata na ha nwere ike ịnwe ụgbọ ala nke m ga-anya mgbe ụfọdụ n'oge oge. - Nke dị jụụ- Ya mere, anyị ga-enwe ngụkọta nke ugboro ise na ndị Fans ahụ ka ga-enwe nhọrọ atọ ịhọrọ ụdị ụgbọ ala m na-agba. - Chere, ya mere ụcha agba ruo ugbu a? Dị ka ihe ị bụ Green bụ nnukwu agba.
Kelly Green bụ nnukwu ihe - m hụrụ. Ma Carvana acha anụnụ anụnụ bụ agba ka mma maka ọnọdụ m. - Ọ dị mma, nke ọma, ị maara gịnị? Ihe na-acha anụnụ anụnụ na-amasị m kamakwa n'ihi na ọ bụ rịbọnụ mmeri.
Ọ bụ ya, acha anụnụ anụnụ bụ akara mmeri - ee - ị na-arụ ọrụ. - project na oru ngo, ee. - Ọ masịrị m, ọ masịrị m.
Mana Kelly Green ka bu agba di uku. Yabụ ị nwere ike ịnya Jimmy Johnson na GMR Grand Prix na Indianapolis Motor Speedway. Lenyekwa Jimmy n'ụlọ ntu iji hụ mkpuchi nke NBC nke Indianapolis 500 na Sọnde Mee 30th.
Ebee ka ụlọ Jimmie Johnson dị na Colorado?
48 ụgbọ ala na2021. Hendrick Motorsports gbadara ọkwa a na-atụ anya ya n'ehihie Tuesday, na-akpọ Alex Bowman dị ka onye ọkwọ ụgbọ ala maka Nr. 48 Chevrolet na-esote oge n'ọnọdụ onye mmeri NASCAR oge asaa.Jimmie Johnson.Ọkt 22 2020
Ndụ onye a ma ama nwere ike iyi ihe na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ, mana n'okwu anwụ anwụ nke Dr. Dre: 'Onye ọ bụla nwere ike inweta ya, akụkụ siri ike na-edebe ya.' Ma ihe ịga nke ọma ha adịteghị aka ma ọ bụ na ha ghọtara na ọ bụghị naanị na a ga-ama ha, ka anyị lee ndị ama ama ama ugbu a bụ ndị nwere ọrụ. (egwu dị egwu) Peter Ostrum. Peter Ostrum dị afọ 12 rụrụ ọrụ nke Charlie Bucketin na 1971 kpochapụwo 'Willy Wonka na Chocolate Factory' mgbe a hụrụ ya na ihe nkiri ụmụaka na -emepụta ihe na Cleveland.
Nke a nwere ike ịbụ tiketi ọla edo ama ama maka onye na-eto eto na-eto eto, mana ọ nweghị mmasị mgbe emechara ihe nkiri ahụ. Ọ jụrụ nkwekọrịta ihe nkiri atọ ma ka ọ na-eme agadi ọ na-ala azụ ikweta na ọ dịtụgoro ihe nkiri nkiri nke Charlie. Ọ bịara bụrụ na Ostrum dị n'ugbo anụmanụ karịa ụlọ ọrụ chocolate.
Ọ gụsịrị akwụkwọ na Cornell's College of Veterinary Medicine ma bụrụkwa dọkịta na anụmanụ na Lowville, New York ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri anọ. Ọ bụ ọkachamara na anụmanụ dị ka ehi mmiri ara ehi, yabụ onye maara, enwere ike inwe olileanya maka mmiri ara ehi chocolate na ọdịnihu ya. Nikki Blonsky.
Ọ bụ ezie na 2007 mega-hit 'Musical Hairspray' zuru iji nweta Nikki Blonsky ọkwa Golden Globes, ezughi iji nweta azụmaahịa ngosi ya na-agbanwe agbanwe. Iji chọta ụzọ ọ ga-esi kwụọ ụgwọ ndị ahụ mgbe ọ na-eche nnukwu ezumike ya na-esote, Blonsky bidoro ịrụ ọrụ n’ebe a na-eme ọmarịcha mma nke Long Island n’afọ 2011. A hụrụ ya ka ọ na-eme ihe niile site na itinye ihe ntecha n’ịacha ụlọ.
Blonsky akwụsịbeghị nrọ ya. Ọ na-aga n'ihu na nyocha mgbe ọ na-arụ ọrụ ya, ma na-egosi oge ụfọdụ na ogbo na ihuenyo, ọ bụ ezie na ọ erubeghị nso ịga nke ọma nke 'Hairspray.' Mana olile anya maka Nikki ọ nwere ike ịbụ ntutu taa, kpakpando nke abụọ echi.
Kevin Jonas. Ọ́ bụrụkwanụ na ụmụnne nwoke atọ nwere olu abụ na ihu igwe na-atọ ụtọ karịa otu egwu egwu bidoro kụọ ọkpọ? Girlsmụ agbọghọ dị afọ iri na ụma na-agba ara ebe niile. Kedu ihe na-eme mgbe ìgwè ahụ kwụsịrị? Ọfọn, ọ bụrụ na ụmụnna Jonas nwere ihe ọ bụla ha ga-enye, ụmụnne nwoke abụọ ahụ na-abanye naanị ha n'ọrụ na ịme ihe na egwu mgbe otu na-abanye ọchụnta ego.
Ee, mgbe nwata nwoke gbawara na 2013, Jonas kacha ochie, bụ Kevin, ghọrọ onye isi ngalaba nke ụlọ ọrụ na-ere ahịa akpọrọ Blue Market. Ọ malitela ụlọ ọrụ mmepe na ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ ma nwaa aka ya na mmemme. Ọ bụ ezie na ọrụ ndị a nwere ike ọ gaghị adị ka ọ dị na ọdịnala, ọ bụ n'ezie ihe dị anya site na ihe mere ya onye a ma ama Themụnna ahụ jikọtara na 2019 iji mee egwu ọhụrụ, ọ dị mma ịsị na Kevin mere ezigbo onye nwere atụmatụ ndabere mgbe ọ nọ ike gwụrụ igwu pop pop ọzọ n'etiti 2000s.
Chris Owen na-echekarị aghụghọ. Maka Chris Owen, nke akpọrọ Chuck, 'The Sherminator' si 'American Pie'. Nke a bụ eziokwu.
N'agbanyeghi na akpọrọ gị na 'American Pie' ọ bụla, ime ihe mgbe niile egosila na ọ na-esiri onye ọ bụla ike 'Sherman' dị ka Chris. Ọ na-arụ ọrụ ugbu a dị ka onye nlekọta na ụlọ oriri na ọ aụ susụ sushi na Santa Monica iji kwado ya n'etiti nyocha ma na-anwale aka ya na foto azụmahịa. Agbanyeghị na ọ gwaghị ndị ahịa ya ka see ha foto, ka ha kwadobe maka 'Sherminated'. , M ga-enwe nnọọ ndakpọ olileanya.
Tom Selleck. Dị ka onye nwe ya bụ afụ ọnụ a kacha mara amara na televishọn, mmadụ nwere ike ịtụ anya na Tom Selleck ga-enwe ọ enjoyụ na ọrụ ihuenyo ya wee bụrụ onye ama ama. Mana mgbe ọ ghọrọ onye ama ama dị ka Magnum PI, Selleck hụrụ ọrụ ya na 2010.
Ọrụ Na-akwụsịlata. Kama nke ahụ, akara ngosi dị na bekee ewepụtala ọrụ ọhụụ nwere ike iyi ọtụtụ ihe ọhụụ. Na ihe bidoro dị ka azụmaahịa azụrụ azụ 30 afọ gara aga, Selleck ugbu a guzobewo onwe ya dịka onye ọrụ ugbo ube oyibo na 30-acre California ranch na asọmpi enyi na enyi ya na onye nwe ugbo ube oyibo agbata obi, Jamie Fox.
Ebumnuche ahụ bụ, Tom adịghịdị amasị avocados mana ọ na-eto ha na agbanyeghị, ịhụnanya gị nke toasted, gbajiri ọka avocados dum na-enye aka na Magnum PI, ego ezumike nka ezumike. Steven Seagal iji gbuo '. Mana ka ọrụ ihe nkiri ya malitere ida mmiri, Seagal kpebiri ịghara ikwe ka ọrụ mmadụ ya laa n'iyi.
Na 2013, a wasụrụ ya iyi dị ka onye nnọchi osote sheriff na New Mexico, na-agbaso ụdị ọrụ mmanye dị iche iche n'oge ndụ ya niile. Nchikota ya nke ike kpakpando, ike na nka agha mere ka o zuo ndi isi ndi isi gburugburu US-Mexico. Dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, na 2018 ọ gbakwunyere onye nnọchi anya pụrụ iche sitere na Ngalaba Ofesi Russia na akwụkwọ nyocha ya nke mmekọrịta nkwanye ùgwù dị ùgwù nke ukwuu na Vladimir Putin.
Ọrụ ya bụ ịkwalite mmekọrịta dị mma n'etiti Russia na America site na mgbanwe nke ọdịbendị na nka. Ọfọn, maka ọtụtụ n'ime anyị, nke a ka nwere ike ịbụ ihe dị iche - enwere obere mgbawa karịa na ihe nkiri, ihe. Terry Chimes.
Na ngwụsị afọ ndị 1970, ndị otu ọkpọ Bekee nke The Clash wakporo ebe egwu ahụ site na egwu ha na-eme ihe ike, nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ha repertoire ghọrọ funk na reggae ụda ma mepụta hits dị ka 'Rock the Casbah' nke ga-enye ha mba ụwa ama. Terry Chimes bụ onye ọkpụkpọ mbụ nke otu ahụ mana ọ hapụrụ ha mgbe ha mechara album mbụ ha n'ihi na ya na ndị ọzọ na-egwu egwu na-ese okwu.
Mgbe ọ na-ekere òkè n'egwuregwu egwu ole na ole n'akụkụ, ọ gbasoro mmasị ya maka ọgwụ na ọgwụgwọ iji ghọọ chiropractor. Ọ nwere ụlọ ọgwụ ugbu a na Essex dị nso na London ma na-enye nzukọ ọmụmụ chiropractic kwa ụbọchị ka ọ na-akụ azụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ ga-achọ ụfọdụ ọkpụkpụ azụ.
Danny Lloyd. 'D ga-eche na nwatakịrị nwoke sitere na Stanley Kubrick bụ isi 'The Shining' ga-aga n'ihu na-ebi ndụ mara mma. Mana eziokwu enweghị ike ịdị iche.
Danny Lloyd, nwa omee dere 'Red Rum!' tiri mkpu, na-ekwu na ọ bụ ezie na ahụmịhe ahụ adịghị njọ maka ya, ndụ Hollywood adịghịrị ya. Mgbe naanị ọrụ abụọ gasịrị, ọ lara ezumike nká site na afọ 10 ma ghara ileghachi anya azụ. Na kọleji, ọ na - ewere ọrụ ndị na - adịghị mma, dị ka ịrụ ọrụ na Walmart ma ọ bụ n'ugbo ezì.
Ugbu a ọ bụ onye nkuzi bayoloji dị umeala na kọleji obodo dị na Kentucky ebe ọ rịọrọ ka ọ gafere aha niile banyere ọrụ ya a ma ama ka ọ ghara ịkpaghasị klas. N'agbanyeghị nke ahụ, ejiri m n'aka na ọ na-anwa site n'oge ruo n'oge ime ihe ọ bụla na 'Lee Danny' na ụmụ akwụkwọ isi ike. Steven Anthony Lawrence.
Ọ bụrụ na ị bụbu onye na-akwado usoro Disney, 'Ọbụna Stevens ga-eme ka obi ruo gị ala.' Cheta agwa, onye agbata obi hụrụ n'anya nke anụ ezi n'anya. Steven Anthony Lawrence bụ ihe echefuru echefu dịka agwa a na ọrụ yiri ya na ihe nkiri dị ka ọnụ ala karịa Dozen na Cat na Hat.
Actingrụ ọrụ ọrụ abụghị ọrụ ahụ, mana nke ahụ egbochighị ya ịkekọrịta ihe ọmụma ya. Ugbu a ọ na - akuzi ndị na - eme ihe nkiri na - achọ ihe, na - enwe nzukọ ọmụmụ ihe na kọleji gafee America, ma mgbe ụfọdụ ọ na - arụ ọrụ dịka Santa's Little Helper na ụlọ ahịa Northern California n'oge ezumike. Fans na-amata ya ugboro ugboro, n'agbanyeghị na ọ dapụrụ n'ọrụ ọ na-arụ na ntutu ya yiri ka ọ gbara alụkwaghịm, onye nwere ike ichefu ihu ahụ. Jack Gleeson. Jack Gleeson, onye omeebe Irish na-akpata 'Game of Thrones', onye onye ọ bụla kpọrọ asị mere nhọrọ pụrụ iche mgbe oge ha nọ na ihe ngosi gwụrụ.
Ọ lara ezumike nká na-eme ihe dịka a na-abọ ọbọ na ajọ ihe Joffery, enwere nsogbu mgbe ọ bụla ọtụtụ ndị na-eto eto na-eche ihu, ụjọ nke ịbụ ndị edere. Mana n'agbanyeghị na nke ahụ bụ ihe kpatara ya, imirikiti mmadụ amaghị na ihe ọ chọrọ n'ezie bụ ịmụ ihe. Mgbe ọ hapụsịrị ihe nkiri ahụ, mgbe ahụ Gleeson dị afọ 21 kwupụtara na ya ga-amụ nkà ihe ọmụma na nkà mmụta okpukpe na Trinity College, Dublin, prọfesọ na prọfesọ na nkà ihe ọmụma, na-achọpụta na ime ihe ekwesịghị ịbụ karịa ihe omume ntụrụndụ maka ya.
Ma eleghị anya, ị chọrọ igwu egwu sadist iji kpọtụrụ akụkụ nkà ihe ọmụma gị. Dylan Nwachukwu. Mụ ejima ahụ, Dylan na Cole Sprouse, arụ ọrụ dị ka ụmụ amaala omee kemgbe amụrụ ha.
Na ọrụ sitere na 'The Suite Life of Zack and Cody' na 'Big Daddy' site na 1999. Ọ bụ ezie na Cole gara n'ihu na-arụ ọrụ ọ na-eme ka ọ bụrụ okenye. Dylan banyere ụdị ntụrụndụ dịgasị iche iche wee bụrụ onye ndu na 'Riverdale' nke CW.
Mee biya. Mead bụ mmanya na-egbu egbu nke ejiri mmanụ a alcoụ na mmiri na-eme. Ọkwá ya ewuwo belatara ntakịrị ihe karịrị otu narị afọ gara aga.
Kedu ihe kpatara Dylan Sprouse ji meghee ebe ọ na-eme biya na 2018 nke amamihe niile? Cole nwere mmasị na ihe ọ drinkụ drinkụ oge ochie sitere na nchekasị na akụkọ ihe mere eme na ịhụnanya maka imepụta ahịhịa nke malitere na 16. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na NYU na 2015, ọ chọpụtara ohere ịtụgharị ihe omume ntụrụndụ ya ka ọ bụrụ ọrụ nkịtị dịka ndị ọzọ anyị na-echigharị na ntinye aka, na-atọ ụtọ, ma na-eduga ahịa ahịa. Site na $ 30 otu karama ahịhịa ahịhịa na ahịa na-eto eto, ọ na-aghọ isi mmalite nke ego maka kpakpando Suite Life.
Hayden Christiansen. N'oge na-adịghị anya mgbe ọ gụsịrị ọrụ akara ngosi nke Anakin Skywalkerin na 'Star Wars' prequels, Hayden Christiansen mere mkpebi na-enweghị atụ iji kpochapụ ndụ ndị a ma ama. Ọ dị ya ka ọrụ ya ọ ghọrọ oke egwu na-achọ ịda, ọ laghachitere site na ngosipụta oge ụfọdụ, na-ese ihe nkiri ndị nwere onwe ha ebe a.
Na 2007 Christiansen zụtara otu ugbo ma jiri afọ 13 gara aga rụzigharịa ya, na-amụta etu esi akụ ihe ubi na ịzụ ehi. Site na agụụ ya maka imewe, ọ malitekwara eriri akwa na mmekorita ya na RW&CO na 2013. N'otu afọ ahụ, ya na nwanne ya nwanyị Tove Christiansen guzobekwara obere ụlọ ọrụ mmefu ego akpọrọ Glacier Films nke dị oke ala ruo n'ụzọ nkịtị-to -ụwa.
Anakin na-arụsi ọrụ ike ma nwee olile anya na ọ nweghị echiche ọjọọ nke Sith. Shaquille O'Neil. Enweghị ihe ọ bụla Shaq enweghị ike ịme? Ọ nwere ike ịgba basketball, ọ nwere ike ịgbapụ, ọ na-ere Icy Hot, mana site ugbu a gaa n'ihu ọ nwere ike ijide gị.
Mgbe ọ gbasasịrị ọrụ na-aga n'ihu na basketball na 2016, a ,ụrụ ya iyi dịka Onye Nnọchiteanya Asọpụrụ Nsọ na Clayton County, Georgia. N'ịbụ onye natara ọzụzụ ndị uwe ojii n'afọ iri gara aga, ọ bụ okwu dị mfe nke aha gụnyere onye osote onye na-anọchite anya akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ọrụ Clayton County. Ọ ghọkwara onye na-enyere aka maka Office nke Sheriff nke Broward County na 2019 ma bụrụ onye na-esonye mgbe niile na mkparịta ụka banyere otu esi eme ka obodo dị nchebe.
Ọ natara aha nke Onye Asọpụrụ Uche Osote US Vice Marshalland na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na California, Arizona, na Florida.
Ọ bụrụ na a ga-eme ka ndị omempụ Shaq-kpoo aka ekpe, aka nri, na etiti, Vanilla Ice Ọ bụrụ na i chere na vanilla ice gbazee site na ala, ọ ga-eju gị anya ịnụ na ọ na-agba gburugburu $ 300,000 na nke ọ bụla n'ime ọrụ ọhụụ ya. Ọ pụtaghị albums ọhụrụ. Ọ bụ ezie na 'Ice Ice Baby' bụ mega kụrụ, ọ bịara sie ike Vanilla, ezigbo aha Robert Van Winkle, iji meghachi ya nke ọma.
Mgbe ya na ọgwụ riri ahụ na-alụ ọgụ, ọ belata egwu ahụ wee hụ ihe siri ike karịa ice. Ahịa ịre ụlọ. Vanilla nwere ikike iji rụzie ụlọ ndị mebiri emebi ma nwee akụ na-ere ha.
Ọbụna nkà ya mere ihe ngosi a kpọrọ 'The Vanilla Ice Project,' nke nwere ndụmọdụ ndị mmadụ nwere ike iji rụzigharị ụlọ nke ha, taa Vanilla Ice nwere netwọkụ ruru ihe ruru nde iri. Ya mere, ọ ka dị anya site na onye ọhụụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na a na-ahụkarị ọrụ ya. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe na-adọrọ adọrọ dị ka ọ dị na chaatị ahụ, Van Winkle nwere ike ime ọtụtụ ihe karị y.
Vanilla enweghị ihere mgbe ọ na-anwa 'Tụgharịa nwa ụlọ ahụ.' Kedu ọrụ ịgbanwere tụrụ gị n'anya karịa? Mee ka m mara na ihe ndị a n'okpuru, ekele maka ikiri. (Bright obi ụtọ music)
Onye ga-anọchi Jimmie Johnson na iri anọ na asatọ?
48 Chevy SS gbadaa Cooper Street. Họrọ obodo ugwu a dị ka nke abụọ nke ezinụlọ yaulo, Aspen makụọlaJohnsonihe dị kaJohnsonanakwerewo Aspen.Dec 6 2017
Onye na-anọchi Jimmie Johnson?
CHARLOTTE, N.C. (AP) - Ebe kachasị achọsi ike na NASCAR bụ nke Alex Bowman na Hendrick Motorsports lineup shuffle todochieonye mmeri oge asaaJimmie Johnsonna akara ngosi Nke 48 Chevrolet. Bowman na onye isi ndị ọrụ Greg Ives, onye meriri egwuregwu iseJohnsondị ka injinia ya, ga-esi na Mba.Ọkt 6 2020
Onye na-anya ụgbọ ala 48 na 2021?
Bịaru ọrụ afọ ya nke atọ na oge nke atọ ya na 13-oge NASCAR Cup Series Champions Hendrick Motorsports,ọkwọ ụgbọ alaAlex Bowman dị njikere maka ọbụna karịa. Na2021, a ga - ejikọ ya na afọ nke anọ n’usoro ya na onye isi ndị ọrụ Greg Ives, mana ya na anya ọhụụ ọhụụ ka ụzọ ahụ na - agagharị na akara ngosi Mba.
Gịnị bụ Jimmie Johnson net worth?
Jimmie Johnson siugbu anet urueme atụmatụ ịbụ ihe ruru $ 120 nde. O nwetala $ 130 nde na mmeri ya naanị nke bụ nnukwu ego.
Kedu ihe netị Rick Hendrick bara?
Rick Hendrick Net thtọ:Rick Hendrickbụ onye ọchụnta ego America, ọchụnta ego, na onye ọkwọ ụgbọ ala lara ezumike nká nke nwerenet urunke $ 1 ijeri dollar.
Jeff Gordon ka ọ nwere ụgbọ ala 48 ahụ?
Gordon, yana Rick Hendrick, co-nwereNke ahụ48Ọ bụ Jimmie Johnson chụpụrụ Chevrolet na mbụ, onye meriri n'asọmpi iko asaa n'afọ 2006 ruo 2010, 2013 na 2016.
Ego ole bụ Jimmie Johnson?
Jimmie Johnson siụgbụ ugbu akwesịrịeme atụmatụ ịbụ ihe ruru $ 120 nde. O nwetala $ 130 nde na mmeri ya naanị nke bụ nnukwu ego.